Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » NASA waxay ku abaalmarisay Qandaraaska Daraasaadka Sariirta DLR
NASA waxay dooratay Deutsches Zentrum fur Luft-und Raumfahrt (DLR) ee Cologne, Jarmalka, si ay u bixiso isticmaalka xarunteeda si ay u taageerto cilmi-baarista nasashada sariirta muddada-dheer.
Qandaraaska Daraasaadka Sariirta oo dhan $49.9 milyan waxa uu taageeri doonaa daraasado nasasho oo sariireed oo taxane ah oo ka socda xarunta shirkadda ee Cologne, Germany. Adeegyada sidoo kale waxaa laga yaabaa in looga baahdo xarumaha kale ee NASA, qandaraaslaha ama goobaha qandaraasle hoosaadka, ama xarumaha iibiyeyaasha.
Qandaraasku wuxuu bixiyaa adeegyo taageero oo loogu talagalay Agaasinka Caafimaadka iyo Waxqabadka iyo Barnaamijka Cilmi-baarista Aadanaha (HRP) ee NASA's Johnson Space Center ee Houston. Si kastaba ha ahaatee, NASA kama filayso wax baahi ah oo loogu yeedhayo tabaruceyaasha waxbarashada ee gudaha Maraykanka
Daraasadaha ay maalgaliso HRP waxay isticmaali doontaa nasasho sariir madax-hoos u adag sidii analoog ahaan qaar ka mid ah laqabsiga jireed ee ay la kulmaan cirbixiyeenadu inta lagu jiro duulimaadka hawada sare. Cilmi-baadhistu waxay rabta inay si wanaagsan u fahamto oo ay u qiimeyso tallaabooyinka ka-hortagga khataraha la xidhiidha hawlgallada hawada sare ee muddada-dheer oo ay ku jiraan Saldhigga Hawada Sare, Barnaamijyada Artemis iyo Gateway.
"Mawduucyada cilmi-baarista ee ugu waaweyn ee sanadkan waa sida shaqaaluhu u shaqeeyaan marka ay si iskood ah uga shaqeynayaan Control Mission iyo sidoo kale taageerada kale ee ku salaysan Dunida iyo waxtarka hababka kala duwan ee horumarinta ee taageerada noocyadan hawlgallada madaxbannaan," ayuu yiri Brandon Vessey, saynisyahanka qaybta cilmi-baarista hawlaha iyo is dhexgalka gudaha HRP. "Natiijooyinka daraasaddan ayaa gacan ka geysan doona in lagu wargeliyo sida NASA u qorsheyneyso hawlgallada sahaminta mustaqbalka marka shaqaalaha cirbixiyeenada ay u baahan doonaan inay si madax-banaan uga shaqeeyaan Dhulka marka loo eego sida ay hadda uga shaqeeyaan Saldhigyada Hawada Sare ee Caalamiga ah ee ku socda orbit-ka hooseeya."
Qandaraaska keenista aan xadidnayn/tirada aan xadidnayn ee ay la socoto shirkado, amaro hawleed qiima go'an, waxa uu bilaabmayaa Noofambar 23, 2021, oo waxa uu soconayaa ilaa Dis. 31, 2025, iyada oo aan lahayn wax waji ah.